अझै एक साता मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने, कारण यस्तो ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अझै एक साता मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने, कारण यस्तो !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै एक साता मन्त्रिमन्डललाई पूर्णता नदिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम दिन गठबन्धनका नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर गठबन्धनका दलहरूले तत्कालै मन्त्रीहरूको नाम दिने सम्भावना देखा परेको छैन।